बलिउडकी यी नायिका पनि भइन् बिहेअघि गर्भवती, खुल्यो यसरी रहस्य – Kavreonline
बलिउडकी यी नायिका पनि भइन् बिहेअघि गर्भवती, खुल्यो यसरी रहस्य
By kavreonline	 On May 13, 2019
मुम्बइ। बलिउडमा अहिले धेरै नौला नौला खबर आइरहेका छन् । केहि समय अघि बलिउड नायिका एमी ज्याकसन विवाह अघि आमा बनेको खबर आएको थियो ।जुन खबरले बलिउडलाइ निकै ततायो । फेरी एउटा यस्तै नयाँ खबर बाहिरिएको छ ।भारतिय मिडियाका अनुसार नायिका एमी ज्याकसनपछि अब ब्रुना अब्दुल्लाह पनि विवाह अघि नै आमा बन्न लागेकी बताइएको छ ।
थुप्रै हिन्दी फिल्ममा काम गरिसकेकी ब्रुना अब्दुल्लाहले गत वर्षको जुलाईमा बेलायती प्रेमी एलान फ्रेजरसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन् ।ब्रुनाले अन्तरराष्ट्रिय मदर्श डेको एक दिन अघि एक अन्तरवार्तामा फू गर्भवती भएको खुलासा गरेकी हुन् । अन्तरवार्तामा उनलाई सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन् ‘विवाह तपाईंको प्रेमलाई दिइने एउटा प्रमाणपत्र मात्र हो । यसले दुई व्यक्तिलाई सँगै बस्नका लागि बाध्य बनाउँछ । केही मानिस विवाहै नगरी सँगै बस्छन् ।’
उनले भनिन् ‘हाम्रो परिवार यो खुसीको खबरले निकै खुसी र उत्साहित छ । विशेषगरी मेरी आमा । उहाँ म आमा बनोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । एलन र म आफ्नो पहिलो सन्तानलाई निकै व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । जब मलाई म गर्भवती भएको भन्ने थाहा भयो तब मसँग विभिन्न काम थिए । सुरुमा मैले आफ्ना सबै काम पूरा गरेँ र त्यसपछि यसबारे खुलासा गरेँ । बच्चाको जन्म पछि म धेरैजसो समय उसैसँग बिताउनेछु ।’ब्रुना अब्दुल्लाह पाँच महिनाकी गर्भवती भएको बताइएको छ ।उनले फिल्म आइ हेट लभ स्टोरी, ग्रान्ड मस्ती, मस्तीजादे र क्यास मा काम गरि सकेकी छिन् ।
तपाई मोटोपनदेखि दिक्क हुनुहुन्छ ? अब न आत्तिनुहोस् ! यस्ता छन् तीव्र रूपमा बोसो घटाउने उपायहरु
कृष्ण ओलीको कम्मरमा यति ठुलो रड भेटियो ! हस्पिटलबाटै रुपाले खोलिन्- कसैले नसोचेको भित्री रहस्य (भिडियो हेर्नुस)